Lungiselela i-aquarium yentlanzi yesikali | Ngeentlanzi
URosa Sanchez | | I-Aquarium yetropiki
Lungiselela i-aquarium efanelekileyo iintlanzi zesalar ihlala yenziwe ngokungathi yenzelwe enye into intlanzi eshushu. Ngumahluko kuphela wokuba yintlanzi kunye amaphiko amakhulu Kuya kufuneka ube ne-aquarium ende. I-aquarium ayiyi kuba ngaphantsi kweesentimitha ezingama-50 ukuphakama. Singathi enkulu ngakumbi ngcono.
I-aquarium ikhula ngcono
Kuya kufuneka uthathele ingqalelo isalar fish ofuna ukuyifaka kwi-aquarium. Eyona nto iphambili kuyo kukuba ukuba sizifumana zincinci okanye ziphakathi kufuneka sitsho ekuhambeni kwexesha baya kuba ngabantu abadala. Ke ngoko ubungakanani abayifunayo buya kuba bukhulu. Ukubala umthamo kwiilitha siya kuthatha isalathiso kwiilitha, hayi ngaphantsi kweelitha ezili-15 ukuya kwi-20 zentlanzi nganye.
Uninzi lwe I-scalar fish yindawo enkulu kakhulu. Ngesi sizathu, xa silungiselela i-aquarium kufuneka sichaze iindawo. Kulungile ngezityalo ezingathathi mbono, zobukhulu obahlukeneyo kunye nakwiindawo ezahlukeneyo ze-aquarium okanye ngamatye ajikeleziweyo. Gcina ukhumbula ukuba izikali ezinje nge umlambo ocothayo, Imisinga eyomeleleyo iyabaxinzelela.
Ke ngoko izihluzo zangaphandle kunye neefilitha zepleyiti ezineempompo ze-centrifugal kufuneka zijikeleze ngokuhamba okuncinci, ukuvelisa imisinga ecothayo. Ukuba kusetyenziswa izihluzi zangaphandle, abo banenkqubo yemvula kumphezulu wamanzi bayacetyiswa.
Ngokubhekisele emanzini, nangona izikali ziqhelana kakuhle, kuyimfuneko ukulandela ezinye iiparameter ukufumana okuhle ikhosistim yaselwandle esempilweni ngakumbi ebusweni bokuzala. Ixabiso lokugcinwa kwamanzi linokwahluka ngokwamanqanaba e-pH, ubunzima kunye nobushushu. Ngokumalunga nokuzala, kufuneka kugcinwe ngaphakathi kweeparameter ezithile ezingqingqwa zokuzala.
El amanzi kufuneka athambile, kunye ne-pH kufutshane no-7 kunye namaqondo obushushu angama-25-26º C ebusika kunye nama-27-28º C ehlotyeni. Ukukhanya akufuneki kugqithise, kwaye kuhluzwe umthunzi wezityalo ngokwazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » I-Aquarium yetropiki » Ukulungiselela i-aquarium yentlanzi yesikali
Yintoni i-biotope aquarium?
Ungayichonga njani intlanzi egulayo